Home Wararka Gudoomiyihii hore ee Bangiga Dh. oo ka digay in laga horyimaado warbixnta...
Gudoomiyihii hore ee Bangiga Dh. oo ka digay in laga horyimaado warbixnta Gudiga Maaliyadda
Guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe Maxamuud Ulusow oo ah qabiir ku xeeldheer arimaha dhaqaalaha iyo maamulka Bangiyada ayaa qoraal dheer uu soo qoray ku soo dhaweeyay warbixintii ay dhawaan soo saareen Gudiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Hoos ka aqriso qoraalka Gudoomiyaha:
Waxaa nasiib darro ah in xubno xildhibaanno ah ku eedeeyaan xubnaha Guddiga Maaliyadda inay yihiin mucaarad, taaso muujineysa garashaxumida xildhibannadaas shaqada Barlamaanka iyo guud ahaan nidaamka dowladeed ee ku qeexan Dastuurka KMG ee Federaalka. Waxaa habboon in Xildhibannadaas la siiyo tababarro aqoontooda shaqo kor soo qaadeysa.
Guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe
Previous articleXisbiga Waddani oo ka horyimid qorshaha in doorashada la dhaafiyo 2019
Next articleDowladda Federaalka oo ciidan u direysa Baydhabo si ay u soo qabtaan Roobow (Nog)
Saraakiil ka tirsan FBI-da Mareykanka oo toogasho lagu dilay
Gen Indhaqarshe oo ka hadlay Weerarkii lagu dilay Saraakiil Ciidan oo...